सहारा मरुभूमि: प्राकृतिक आश्चर्य र रहस्यमय Hieroglyphs | Absolut यात्रा
लुइस मार्टिनो | | अरूलाई
सहारा मरुभूमि भूमि देखि एक विशाल विस्तार हो जुन मा देखि फैलन्छ रातो समुन्द्र सम्म एट्लान्टिक महासागर, लगभग साढे नौ मिलियन वर्ग किलोमिटर ओगटेको। कूल कभर गर्दछ दस देशहरू ती मध्ये जो मिश्र, लिबिया, चाड, अल्जेरिया, मोरक्को, ट्युनिसिया र मॉरिटानिया।
त्यो विस्तारको साथ, यो कुनै आश्चर्यको कुरा जस्तो आउँदैन संसारको सबैभन्दा ठूलो तातो मरुभूमि र यो विभिन्न ecoregions समाहित गर्दछ, प्रत्येक को यसको विशिष्टताहरु छ। यसैले उनीहरूसँग केही गर्नुपर्दैन दक्षिणी सहाराको मैदान र वृक्षारोहित साभन्ना संग तिब्स्टि मासिफको जेरोफिलस पहाड। र उस्तै दुई साथ अघिल्लो दुई मध्ये कुनै पनि Tanezrouft, पृथ्वीमा सबैभन्दा चरम स्थानहरू मध्ये एक। तसर्थ, यदि तपाईं विशाल सहारा मरुभूमिको बारेमा थोरै जान्न चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई हाम्रो यात्रामा सामेल हुन आमन्त्रित गर्दछौं।
1 सहारा मरुभूमिमा के हेर्ने र गर्ने
1.1 एनेन्डी पठार
1.2 अहागर मासिफ
1.3 मज्ब उपत्यका
1.4 Nouadhibou, सहारा मरुभूमिमा एक जहाज कब्रिस्तान
1.5 Ait बेन haddou
1.6 एर्ग चेब्बी, टिब्लो समुद्र
1.8 फिजान, लिवियाको सहारा मरुभूमिको भाग
1.9 Uweinat माउन्ट, रहस्यमय hieroglyphs
2 सहारा मरुभूमिमा जान कहिले राम्रो हुन्छ
3 सहारामा कसरी पुग्ने
सहारा मरुभूमिमा के हेर्ने र गर्ने
सहारा मरुभूमिका असंख्य क्षेत्रहरू छन् जुन हामी तपाईंसँग कुरा गर्ने छैनौं। कारण धेरै सरल छ: ती ठाउँहरू यति छन् inhospitable त्यो मात्र प्रामाणिक विज्ञ पेशेवरहरू जसले राम्रा राम्ररी जान्दछन् ती भूमिहरूको रहस्य तिनीहरूलाई यात्रा। यद्यपि त्यहाँ अन्य साइटहरू पनि छन् जुन हामी भ्रमण गर्न सक्छौं आयोजित भ्रमण र ती उनीहरूको सुन्दरताले हामीलाई चकित पार्नेछन्। हामी उनीहरु मध्येका केहि जान्ने छौं।
यो अविश्वसनीय ठाउँ को पूर्वोत्तर मा अवस्थित छ चाड र यो हाम्रो ग्रहको सबैभन्दा दुर्गम मानिन्छ। चारै तिर बालुवाले घेरिएको, यो यसको प्रभावशाली घाँस र मैदानहरूको लागि बाहिर खडा छ।
विश्व सम्पदा, प्रकृति Ennedi मा गठन भएको छ विशाल मेहराब र स्तम्भहरू। पहिलो मध्येको बाहिर खडा छ अलोबा, जुन १२० मिटर उचाई र in 120 चौडाईमा पुग्छ। र उत्तिकै उत्सुक पनि छन् पाँच आर्चहरू, जुन यसको नामले स indicates्केत गर्दछ, five उद्घाटनहरूको साथ विजयी कमानको एक प्रकार बनाउँछ, र हात्ती आर्च, जो प्याचिर्डमको ट्रंक र यसको माथिल्लो भागमा आँखा पनि मिल्छ।
मानौं कि यी सबै पर्याप्त थिएनन्, यस इनहोस्पेल्टेन्ट ठाउँमा तिनीहरूले फेला पारेका छन् चित्रहरु यो देखाउँदछ कि यो बस्थेको बेलामा थियो होलोसिन (चौथे सहस्राब्दी ई.पू.) क्षेत्र मा ती विशेष गरी प्रख्यात छन् Niola doa, दुई मिटर उचाईमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै।
Ahaggar को मसिफ
हामी अब दक्षिण तिर लाग्छौं अल्जेरिया सहाराको अर्को सबैभन्दा प्रभावशाली ठाउँहरूको भ्रमण गर्न। यो Ahaggar को पहाडी मासिफ वा हो होगर। यसको उचाइको बावजुद, यस क्षेत्रको मौसम मरुभूमिमा अन्य ठाउँहरूको तुलनामा कम चरम छ, त्यसैले यो धेरै पर्यटकहरूले भ्रमण गर्छन्।
समयको अन्तरालमा, इरोसनले यी हिमालहरूलाई मनमोहक आकारहरू दिएका छन् जुन ल्यान्डस्केपलाई ए रहस्यमय उपस्थिति। यदि यी सबैमा हामी थप्दछौं कि यो भूमि हो imuhaghशहरहरू मध्ये एक तुआरेग कि सहारा बसोबास, हामी यो जादू मा लपेट्न समाप्त हुनेछ।
यस क्षेत्रको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण सहर, जहाँबाट पर्यटक भ्रमण प्रस्थान गरिएको छ Tamanrasset। यदि तपाईं एक प्रामाणिक ओएसिस वरिपरि बनेको शहर जान्न चाहानुहुन्छ भने, यो तपाईंको गन्तव्य हो। थप रूपमा यसमा प्रागैतिहासिकको सानो संग्रहालय र भूगोलको अर्को स another्ग्रहालय छ। तर यो अधिक प्रख्यात छ किनकि यसमा फ्रान्सेली स्थापना भएको थियो चार्ल्स डे फाउकल्ड, अन्वेषक र कलको रहस्यमय "मरुभूमिको अध्यात्म".
हामीले अल्जेरियालाई सहाराको अर्को अचम्मका चीजहरू छोड्न छाडेनौं: मेजाब उपत्यका, घोषणा गर्‍यो विश्व सम्पदा। यो उपत्यकामा क्रस पारिएको एउटा चट्टानी पठार हो जुन यही नामको नदी राख्छ।
यो बसोबास गर्दछ केटीहरू, बर्बर जातीय समूह जुन सानो पर्खाल शहरहरू द्वारा वितरण गरिएको थियो, जुन प्रत्येक क्षेत्रको एक डाँडाहरूमा निर्माण गरिएको थियो। यी स्थानहरू मध्ये छन् बेनी इस्गुएन, जसको मस्जिद बाह्रौं शताब्दी देखि मिति; मेलिका, बोनौरा o अटेफ। तर सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण छ घरदिया, एउटा नाम जुन पूरै जटिलमा पनि दिइन्छ, यसको सडक सडकहरू र यसको सानो एडोब घरहरूको साथ।
Nouadhibou, सहारा मरुभूमिमा एक जहाज कब्रिस्तान
यद्यपि यो खास आकर्षक छैन, हामी यी लाइनहरूमा नौदिबु शहर ल्याउँछौं किनभने यो सम्पूर्ण जहाजको चिहान हो, मरुभूमिमा अचम्मको कुरा हो। यद्यपि यो अटलान्टिक महासागर तटमा अवस्थित छ माउरिटानियाजहाँ सहारा समुद्रलाई भेट्छ।
एउटा ठूलो आर्थिक स into्कटमा डुबेको, देशको सरकारले संसारभरिबाट जहाजहरूलाई यसको किनारमा छोड्ने अनुमति दियो। नतीजा यो छ कि त्यहाँ तपाईं लगभग तीन सय देख्न सक्नुहुन्छ जुन समयको साथ पतित हुँदैछ रaसाँच्चै भूतले दृश्य.
Ait बेन haddou
Este केसर o सुदृढ शहर मोरक्कन संसारभरि लोकप्रिय भएको छ र यसको र that्गको विस्तृत श्रृंखलाका लागि सूर्यले यसको एडोब घरहरू प्रतिबिम्बित गर्दछ। तपाईंले यसलाई केही घण्टाको ड्राइभबाट पाउनुहुनेछ माराकेच पुरानो मार्गमा ऊँट कारवाँहरू द्वारा प्रयोग गरिएको।
ऐट बेन हद्दूको सुन्दरता यस्तो छ कि यो घोषणा गरिएको छ विश्व सम्पदा र धेरै को लागी सेटिंग को रूप मा सेवा गरेको छ चलचित्रहरू 'लरेन्स अफ अरेबिया', 'द ज्वेल अफ द नील' वा 'अलेक्ज्याण्डर दि ग्रेट' जस्ता र 'गेम अफ थ्रोन्स' जस्ता टेलिभिजन श्रृंखलाबाट।
एर्ग चेब्बी, टिब्लो समुद्र
मा अवस्थित मोरक्कोयस टिब्बाको समुद्रले करिब एक सय र दस वर्ग किलोमिटर ओगटेको छ र यो पनि वास्तवमै प्रभावशाली छ। क्षेत्रको सबैभन्दा लोकप्रिय आकर्षण मध्ये एक ऊँट चढ्नु र प्रामाणिक पालहरूमा सुत्नु हो।
यी मार्गहरू शहरबाट छुट्छन् Merzouga, जुन उत्तम रूपमा धेरै होटलको साथ पर्यटन अनुकूलित छ। यसमा तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ Merzouga रैली, जुन डाकार श्रृंखला सर्किटको अंश हो। र यो पनि एक एकवचन छ पौराणिक कथा यसको टिब्बाको सम्बन्धमा। यसले भन्छ कि तिनीहरू ईश्वरीय क्रोधबाट जन्मेका थिए जब मेरजुगाका बासिन्दाहरूले आमा र उनका बच्चाहरूलाई सहयोग गर्न अस्वीकार गरे। ईश्वरीयताले तब एउटा भय terrible्कर बलुआ आँधीलाई जगायो जसले तिनीहरूलाई सिर्जना गर्‍यो। यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूले आज पनि विश्वास गर्छन् कि ती टिब्बाबाट चिच्याएको उनीहरूले सुनेको छ।
छोड्नु बिना मोरक्कोसहाराको धेरै प्रवेशद्वारमा अर्को भेट हो ओवार्जाजाटे वा Uarzazat, को रूपमा यसलाई चिनिन्छ The मरुभूमिको ढोका »। यो को पाउमा मा स्थित छ एटलस हिमालहरू र भनिन्छ अर्को दक्षिण ओएसिस.
ठीक एटलस लाई भनिन्छ फिल्म अध्ययन शहर मा के छ। यदि हामीले तपाईंसँग आईत बेन हद्दूको बारेमा बिभिन्न फिल्महरूका लागि सेटिंगको रूपमा कुरा गरेको थियौं भने यो प्रायः यी सेटहरूको अस्तित्वका कारणले हो, जसले करीव २० हेक्टर जग्गा ओर्साटलाई बनाएको छ। मोरक्कोको फिल्म राजधानी.
Ouarzazate मा Taourirt को काश्बा
तर शहर मा तपाईं को पेशकश गर्न केहि अधिक छ। शुरुवातकर्ताहरूको लागि, यो आश्चर्यजनक र पूर्ण रूपमा सुरक्षित गरियो ताउरिटको गढी। एक हो कश्बा वा बर्बर मूलको किल्ला जुन शहरको बीचमा छ र यो समयमा, माराकेचको पाशाको निवास स्थान थियो। यो प्राय समुद्र तटको विशाल रेत महलसँग तुलना गरिएको छ। र यो एक सटीक छवि हो किनकि यसको एडोब पर्खाल र मरूभूमिको विशालताको बीचमा यसको ठुलो टावरहरूले त्यसलाई त्यो पक्ष दिन्छ।
फिजान, लिवियाको सहारा मरुभूमिको भाग
Fezzan क्षेत्र सम्भवत यो को सब भन्दा देखिने भाग हो लिबिया सहारा। यो फराकिलो ठाउँ हो जहाँ मरुभूमि पहाडहरू र सुख्खा उपत्यकाहरूसँग मिल्दछ, तर सबै भन्दा माथि, जहाँ प्रत्येक निश्चित दूरी एक नखलिस्तान देखा पर्छ जुन वरपरका मानिसहरूले जीवन प्रदान गर्दछ।
सहाराको यो क्षेत्रले तपाईंलाई ज्वालामुखी क्रेटर जत्तिकै प्रभावकारी परिदृश्य प्रदान गर्दछ Waw-an-Namus, को आयाम को तथ्य यो एक ओएसिस र तीन कृत्रिम ताल हो कि तपाईं लाई एक विचार दिन्छ। साथै बालुवाको समुद्र Murzuq, यसको भव्य टिब्बाको साथ; अनौठो अकाकुस पर्वतहरू, तिनीहरूको सनकी आकृतिहरू, वा खजूरका रूखहरू र नुनहरूको नुनिलो को किनारामा अवस्थित उम्म-अल-मापुरानो ठाउँको मेगाफेजान ताल जो इ England्ल्याण्ड जत्तिकै ठूलो थियो।
अर्कोतर्फ, यस क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शहर हो Sabhaलिबियाका पूर्व नेता मुहम्मद अल गद्दाफी हुर्केका एक लाख हजारवासीहरूको ओएसिस सहर। तर त्यहाँ अरू साना व्यक्तिहरू छन् Ghat, Murzuq o गधामिस.
Uweinat माउन्ट, रहस्यमय hieroglyphs
Uweinat मासिफ बिच वितरण गरिएको छ मिश्र, लिबिया आफैं र सुडान। यो सहारा मरुभूमिले घेरिएको छ, तर यसमा पनि यस जस्तो उर्वर फलानहरू छन् बहारिया o फराफ्रा। क्षेत्र हाइकर्सका लागि शक्तिशाली चुम्बक हो जसले साहसिक कार्य मनपराउँदछ।
एल फेज्जनमा शिविर
तर सबै भन्दा माथि, यो स्पष्ट देखिन्छ किनकि मैदानको मैदानमा गिल्फ कबीर ढुv्गा र नक्शामा पाए hieroglyphs धेरै पुराना जुन सबै प्रकारका जनावरहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। ती मिश्री अन्वेषकले फेला पारे अहमद हसनेन पाशा १ 1923 २ in मा। यो एकले त्यो क्षेत्रको चालीस किलोमिटर यात्रा गर्यो, तर अन्त्यसम्म पुग्न सकेन त्यसैले सम्भव छ कि त्यहाँ अझ धेरै छन्।
अन्तमा, यस क्षेत्रमा प्रभावशाली छ केबीरा क्रेटरजुन झण्डै पचास मिलियन वर्ष पहिले उल्का पिण्डको प्रभावको परिणाम हो र चार हजार hundred सय वर्ग किलोमिटरको विशाल क्षेत्र कभर गर्दछ।
सहारा मरुभूमिमा जान कहिले राम्रो हुन्छ
मानौं तपाईं सहारा संग छ विश्वको सबैभन्दा चर्को मौसम। यो सत्य हो कि जग्गाको यस्तो विशाल क्षेत्रसँग बल गरेर, विभिन्न मौसमहरू प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। यद्यपि वर्षा र चरम तापको अभावमा प्रायः पचास degrees डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्ने सबैका लागि यो सामान्य हो।
वास्तवमा वसन्त र ग्रीष्म desertतु मरुभूमिमा मात्र सूर्यास्त हुन्छ। त्यसकारण सहाराको लागि यात्रा गर्ने उत्तम समयहरू हुन् शरद र जाडो, विशेष गरी महिनाहरू जुन नोभेम्बरदेखि फेब्रुअरीसम्म जान्छ।
र, भ्रमणका लागि, तपाईले सँधै छान्नु पर्छ संगठित। तपाईं बिना रेतीको यो कलसससमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न योग्य गाईड किनकि तपाईको जीवन गम्भीर जोखिममा हुनेछ।
सहारा मरुभूमिको क्षेत्र
सहारामा कसरी पुग्ने
हामी यो विशाल मरुभूमिमा जानको लागि एकल तरिका सिफारिस गर्न सक्दैनौं। कारण यो छ कि तपाईं यसलाई विभिन्न देशहरूबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। जे होस्, सामान्य कुरा यो हो तपाईं नजिकैको शहरमा उडान गर्नुहोस् र त्यसपछि भाँडा, हामीले भने जस्तै केहि संगठित भ्रमण.
उदाहरण को लागी, यदि तपाई मोरक्को सहारा भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ, तपाई जस्तो शहरहरुमा उडान गर्न सक्नुहुन्छ माराकेच र त्यहाँ एक पटक, भ्रमणका लागि खोजी गर्नुहोस्। यद्यपि त्यहाँ विशेष एजेन्सीहरू छन् जुन तपाईंलाई पहिले नै प्रस्ताव गर्दछ सम्पूर्ण यात्रा प्याकेज तपाईं जानु अघि।
अन्तमा, सहारा मरुभूमि छ तातो बीच संसारमा सबैभन्दा ठूलो। यसले धेरै देशहरूलाई समेट्छ र तपाईंलाई प्राकृतिक चमत्कारहरू प्रदान गर्दछ, सपना शहरहरू ओड्सको फेदमा र यसको ढु stones्गाहरूमा रहस्यमय कुर्तिहरू जुन समयको अभावहरूमा फर्किन्छ। के तपाईं हाम्रो ग्रहको कलसस जान्न हिम्मत गर्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » सहारा मरुभूमि
एक्लै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ वा एक संगठित समूहमा?